Injiilka shaaca ka qaaday Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Sahminteenii waxaan ku dhameeysatirnay Towreedii iyo Sabuuradii, oo ahaa buugaagtii Nabiyadii hore ee reer BinuIsraa`iil. Waxan ku aragnay Sabuurka inoo dhow inay jiraan qaab loo… Read More »DHALASHADII MASIIXA:Waxaa sii sheegay nabiyadii waxana ku dhawaaqay Jabriil
Surah Al-An’Aam (Surah 6 – Lo’da, Xoolaha) waxay noo sheegaysaa inaan u baahan nahay inaan ‘toobadkeena’. Waxay leedahay Markay kuu Yimaadaan kuwa Rumeeyey Aayaadkanaga waxaad… Read More »Nabi Yaxye ama Yooxaana wuxuu diyaariyay wadadii
Suuradda Al-Anfal (Surah 8) waxay noo sheegaysaa sida Shaytanku dadka u tijaabiyo. Markuu u Qurxiyey Shaydaanku Camalkooda kuna Yidhi wax idinka Adkaan oo Dada ma… Read More »Ciise Masiix Waxaa jarabay ama tijaabiyay shaydaan
Suuradda Al-‘Alaq (Surah 96 – Dharka) wuxuu noo sheegaysaa in Eebbe ina baray waxyaabo cusub oo aanaan hore u aqoon. Ee Dadka baray sida Qalinka… Read More »eMasiixa ayaa lagu muujiyay – xagga Baristiisa Awoodda leh
Surah ‘Abasa (Surah 80 – He Frowned) wuxuu duugaa nabi Muxamed CSW isagoo la kulmay nin indha la’. Miyaad ogtahay inay u dhawdahay inuu hanuuno… Read More »Ciise wuxuu wax ku bogsiiyay- awoodda erayga
Surah Adh-Dhariyat (Surah 51 – Dabayllo Dabeyl leh) ayaa sharraxaya sida Nebi Muuse CSW loo diray Fircoon. (Nabi) Muusana calaamo lagu waana qaatu ahaa markaan… Read More »Erayga Ciise Masiixi wuxuu ka Awood badnaa Dabeecadda
Suuradda As-Sajdah (Suuradda 32 – Ru kuucid) waxay sharraxaysaa kuwa tukada iyagoo u sujuuday oo markaas ku yidhi ajrigooda ma oga Nafu waxa loo qariyay… Read More »Boqortooyada Eebeay: Qaar badan baa la casuumay laakiin…
Sidee bay muhiim u leedahay in daahir loo ahaado? Suuradda An-Nisa (Surah 4 – Haweenka) ayaa sheegysa kuwa (Xaga) Rumeeyow haw dhawaanina Salaadda idinkoo sakhraansan… Read More »Ciise Masiix wuxuu baray nadaafadda gudaha
Surah Ghafir (Surah 40 – Is cafinta) waxay baraysaa in Eebbe dambi dhaafo Ee dhaafa danbiga aqbalana toobadda, ayna darantahay ciqaabtiisu, ee nicmada badanleh, Eebe… Read More »Ciise Masiix wuxuu wax ku baray is cafintaa
Waxaan soo aragnay siduu Ciise Masiixa wax ogu baray isagoo leh awood gaar ah. Waxaa kale oo uu baray isaga oo adeegsanaya sheekooyin muujinaya mabaadiida… Read More »Ciise Masiix ayaa wax ku baray-Masaalo